Salaadda Saint Charbel. ? Xaaladaha Adag, Jacaylka iyo Xanuunada
Ducada Saint Charbel. Waxaa la sheegay in St. Charbel ay awood u siisay inay rajo ka siiso hooyo da 'yar oo la ildaran xanuun daran. Taariikhdu waxay noo sheegaysaa inay naagtani iimaan weyday isla markaana uu maalin wadaad wadaad ahi kula taliyay inay a salaadda in la salaamayaa inuu kaa caawiyo dhibaatadaada caafimaad.
Si kastaba ha noqotee, haweeneydu waxay ku qanacday inuusan jirin cid dhageysata salaaddeeda, isku daygii ugu dambeeyay, hadda ku dhawaad ​​itaal la'aan, waxay tustay ducadan oo waxay heshay mucjisadii ay sugaysay oo aad u badan.
Xoog, xoog badan oo aaladdeena kaliya ee waqtiyadaas marka rajooyinka ay u muuqdaan inay baaba'aan, salaadda ayaa ah tan iyo intaas.
1 Ducada Saint Charbel
1.1 U soo duceeya Saint Charbel kiisaska adag
1.2 Salaad mucjiso ah oo ku socota Saint Charbel jacayl
1.3 Salaadda Saint Charbel ee bukaanka
1.4 Salaad mucjiso ah Super shaqo
Kahor intaadan u duceyn salaadda Saint Charbel waa inaan aragnaa kan quduuska ah.
Sheekada u sheeg in magaciisa uu ahaa Yuusuf Antoun Makhlouf wuxuuna ku dhashay magaalo ku taal Lubnaan 1828.
Wuxuu naftiisa u hibeeyay diinta, wuxuu siiyay naf iyo maal waxaana loo yiqiin Maronite markii uu galay mid ka mid ah monasteriyadaas wuxuu helay magaca Charbel sanadkii 1859-na waxaa loo caleemo saaray wadaad.
Laga soo bilaabo halkaas Wuxuu sii waday noloshiisa si buuxda diintiisa, a Dios, kaniisadda y l duco. Wacdiyuhu wuxuu ahaa eraygii isaguna ahaa cilmi-nafsi.
Lix iyo toban sano ayuu ku noolaa Konton San Marón wuxuuna ilaaway qoys, guri, asxaabtiisa iyo dhulkiisa.
Xilligii uu dhintay, dadka qaarkiis waxay yiraahdaan qabrigiisa, oo ku yaal qabuuro ku taal isla buuggaas, nalal la yaab leh ayaa soo baxay, ifafaale maalmo badan hareeyay.
Noloshayda waxaan ku haystay hadiyadda bogsashada ee Eebbe siiyay dhimashadiisa ka dib wuxuu sii waday inuu bogsiiyo dadka.
Mu'miniintu waxay bilaabeen inay booqdaan qabrigiisa maalin kadib markii laga saaray laambada darteed, waxay ogaadeen inuu maqaarkiisu dhididaayo oo dhiig uu jirkiisa ka soo baxayo.
Tan iyo markaas waxaa jiray dad badan oo ka bogsaday cudurada halista ah.
U soo duceeya Saint Charbel kiisaska adag
Bal macbudka sharafta leh!
ugu yeeray Ilaah inuu keligiis noolaado,
quduus looga dhigay jacayl isaga keliya,
iyo in si qumman oo qalbi furan,
waxaana waxyooday iftiinka Eucharist,
Waxaad qaadday iskutallaabta adoo dulqaad leh iyo dayrin,
wadadayada ku iftiimin iimaankaaga weyn,
Oo neeftaada ha ku xoogeyso rajadeenna.
Saint Barbara jecel oo ah wiilkii Ilaah,
in xoolaha, marka laga reebo wax kasta oo dhulka jooga
iyo saboolnimo dhab ah iyo is-hoosaysiin,
Waxaad soo martay silica jirka iyo nafta
Si aad u wanaagsanaato oo cirka u soo gasho,
na bar si aan u hogaamino dhibaatooyinka nolosha
Samir iyo dhiirranaan
oo naga badbaadi wixii xunxun oo dhan
Taas oo aan u istaagi karin
Saint Barbara, waa mucjiso mucjiso ah
iyo wax kasta oo baahi badan oo baahi leh,
Waxaan kuugu imid kalsoonida qalbigayga oo dhan
si aad u codsato caawimaadaada iyo badbaadadaada xaaladahan adag,
Waxaan kaa baryayaa inaad si deg deg ah ii siiso nimco
oo aan maanta aad ugu baahanahay,
Hal eray ayaa kaaga yimid jacaylkaaga, Ciisena iskutallaabta lagu qodbay,
Badbaadiyeheenna iyo Bixiyahayaga,
Waa ku filan isaga inuu ii naxariisto
oo si dhakhso leh uga jawaab codsigayga.
aad aad u jeclaaday Quduuska ah Eucharist quduuska ah,
in aad ku quudiseen Ereyga Ilaah
Injiilka Quduuska ah,
in aad ka tagtay waxaas oo dhan
Taasi waxay kaa saari doontaa jacaylka Ciise Masiix
iyo hooyadiis oo barakaysan, Maryantii bikradda ahayd,
ha nooga tegin xal deg deg ah,
oo naga caawiya inaan ogaano Ciise iyo Maryan inbadan iyo inbadan,
si ay iimaankeenna u kordhiyo,
si aan kuugu adeego oo aad codkan Ilaah maqashid,
oo fuliya doonistiisa oo ku noolaada jacaylkiisa.
Laga soo bilaabo kiiskii ugu horreeyay ee loo yaqaan hooyadan da 'yarta ah ee heshay mucjisooyinka bogsashada markay u maleyneyso inaysan rajo lahayn, Quduuskan wuxuu noqday mucjiso ahaan kiisaska adag, kuwaa oo loo maleynayay inaysan xal u helin.
Mucjiso xitaa dhimashadiisa ka dib, maxaa yeelay jirkiisa wuxuu ka soo saaraa walax saliideysan oo awoodaha bogsiinta ay yihiin mucjiso.
Kaniisadda Katooliga ayaa ilaalinaysa dareerahaas waxaana loo yaqaanaa 'Relics' ee Sn Charbel, oo ah kansarka kiisaska adag.
Salaad mucjiso ah oo ku socota Saint Charbel jacayl
Aabbe aad loo jecel yahay Charbel, oo u ah sida xiddig dhalaalaya oo ku yaal cirka Kaniisadda, ayaa jidadkayga iftiimiya, oo rajadayda xoojiya.
Waxaan kaa codsanayaa nimcada (…) inaad ii baryootid hortiisa Rabbi iskutallaabta lagu qodbay, oo aad had iyo jeer caabudaysay Oh! Saint Charbel, tusaale samirka iyo aamusnaanta, ayaa ii duceeya.
Oh! Rabbiyow Ilaahayow, adigu yaa quduus ka dhigay Saint Charbel oo aad ka caawisay inuu qaado iskutallaabtiisa, i sii dhiirranaan aan ugu adkaysto dhibaatooyinka nolosha, samir iyo ka tagid doonistaada quduuska ah, adoo u maraya shafeeca Saint Charbel, adigu nimco ha kuu ahaato weligiis…
Oh! Aabaha Naxariista leh ee San Charbel, Ayaan kuugu soo jeedsadaa kalsoonida qalbigayga oo dhan.
Sidaas darteed adoo ku baryaya Ilaah hortiisa awoowe, waxaad i siineysaa nimcada aan ku weyddiisto ...
(dhig Amarkaaga Jacaylka)
Mar labaad ii tusi jacaylkaaga.
Oh! Saint Charbel, beerta wanaagga, ayaa ii duceeya.
Oh! Ilaahow, adigu waxaad siisay St. Charbel nimcada inay la mid yihiin, igu caawi gargaarkaaga, si aad ugu korto wanaagga Masiixiyiinta.
Ii naxariiso si aan kuugu mahad naqo weligaa.
Ma jeceshahay duco Mucjiso ahaan Saint Charbel jacayl?
Wuxuu ka tanaasulay jacaylka lamaanaha, qoyska iyo asxaabta si uu naftiisa u siiyo jacayl aad u nadiifsan oo jacayl Eebbe ah.
Tani waa sababta St. Charbel sidoo kale loo sameeyay baryada jacaylka, maxaa yeelay isagu wuu ka badan yahay qofkuu yaqaan jacaylka Ilaah ee ah jacaylka ugu daahirsan ee jira.
Caawin xalliyaan kiisaska adag ee qoyska iyo inaad awoodo inaad hesho jacayl run ah, tani dhib ma leh inta rajo ee aad leedahay ama haddii dhammaantood luntay, isagu waa khabiir xaaladaha aan macquul aheyn.
Salaadda Saint Charbel ee bukaanka
Oh! Quruxda Qaawan.
Adiga, oo aad noloshaada ku qaadatay kelinimo, is-hoosaysiin iyo kala-bax duug ah.
Inaadan ka fikirin dunida farxaddoodana aan ku jirin.
In aad hadda fadhido midigta Ilaaha Aabbaha ah.
Waxaan kaa codsaneynaa inaad noo duceyso, si uu noogu fidiyo gacantiisa barakada leh wuuna ina caawiyaa. Faham maskaxdeena. Kordhin iimaankeena.
Ku xooji doonistayada si aan u sii wadno salaaddayada iyo baryadayada hortaada iyo quduusiinta oo dhan.
Oh Saint Charbel! Adigoo ku duceeya xooggaaga, Ilaaha Aabbaha ahu wuxuu ku shaqeeyaa mucjisooyin, wuuna sameeyaa yaabab xoog leh.
Taasi waxay bogsiisaa bukaanka oo u soo celisaa sababta kuwa dhibaataysan. Taasi waxay indhaha u celisaa indhoolayaasha iyo dhaqdhaqaaqa kuwa curyaanka ah.
Ilaaha Qaadirka ah Ilaaha Qaadirka ah, noogu naxariiso, noo naxariiso oo noogu ducee, waayo, ducadda xoogga badan ee Saint Charbel, (Halkan ka codso (yaasha)) oo naga caawi inaan wanaagga qabanno oo ka fogaano xumaanta.
Waxaan kaa codsaneynaa ducadaada mar kasta, gaar ahaan saacadda geerida, Aamiin.
Aabaheena, Hail Mary iyo Gloria Saint Charbel ayaa noo duceeya.
Ka faa'iidayso awoodda salaadda mucjiso St. Charbel ee bukaanka iyo weydiisiga raallinimo.
Saint Charbel waa la garaacay ka dibna la istcimaalay maadaama kumanaan kiisas mucjiso ah oo dunida ka jira loo aaneeyey isaga.
Laga soo bilaabo mucjisadiisii ​​ugu horaysay ee la ogaa wuxuu tusay in hadiyadda mar loo dhiibey uusan jirka uga tagin xitaa dhimashadiisa isla kadib.
Salaadda St Charbel ee bukaanka waa mucjiso, kaniisadda katooliga waxay haysataa maragfurka tobaneeyo rumaystayaal ah oo sheeganaya inay mucjiso ka heleen St. Charbel maalin walbana sheekooyin badan oo dad ah oo dib u helay oo xoojiyay iimaankooda ayaa lagu daray. mid ka mid ah dhacdooyinka mucjisada ah.
Salaad mucjiso ah Super shaqo
'Rabbi Ciisow, waa u duceeyaa dhibaatooyinka oo dhan, wuxuu ii raadiyaa shaqo aan ku dhammaystiro nafsad ahaanteyda qof bani'aadam ah iyo in qoyskeygu uusan u baahnayn wax ku filan dhinac kasta oo nolosha ah.
Hayso inkasta oo ay jiraan duruufaha iyo dadka tabaaleysan.
Taas oo isaga ku jirta waxaan had iyo jeer horumar ku sameeyaa tayada noloshayda oo aan ku raaxeysanayaa caafimaad iyo xoog.
Maalintaas maalinba maalinta ka dambaysa waxaan isku dayaa inaan waxtar u yeesho kuwa igu hareeraysan waxaanan balanqaadayaa inaan u faafiyo cibaadadaada si aan u muujiyo mahadnaqa aad ii hayso
Salaaddan Saint Charbel ee shaqada waa mid awood badan!
Xaaladaha foosha waxaad sidoo kale u tagi kartaa awliyadan kaas oo naga caawin kara xallinta xaaladaha murugsan.
Xaaladaha adag ee nolosha shaqada waxay noqon karaan kiisaska xalka ugu fiican ay noqon karaan in laga baxo oo lagu kala baxo shaqo la'aan.
San Charbel ayaa naga caawin karta inaan ka baxno isfaham kasta, oo aad ugu badan jawiga shaqada, heerkastoo ay dhibtu jiraan.
Salaaduhu way xoog badan yihiin xaaladahaas shaqona waxaa lagu talinayaa in la sameeyo ka hor inta aan la bilaabin maalinta la siin lahaa, habkan qaylada xun ayaa ka tagaysa oo xakameeyaha ayaa la xakamayn karaa si markaa haddii xaalad kacsato loo maareeyo sida ugu fiican .
Salaada ilaa Saint Martin Knight